Scania SBAT 111 S, 36190 6x6 Afio afo - Kinne Maskinteknik AB
Feeder / Sofina SKAKO
Ny kodiarana enina no nitondra fiara matanjaka afo taloha niaraka tamin'ny motera Scania DS 300 hp.
Lehibe "lelan'ny lela"
Rano rano 1000 litatra miampy pump pump Ruberg 500 l / min.
Ny famonosana vita amin'ny afovoany misy 50 m ho an'ny tady enina taonina.
7 m hazavana jiro.
Baolina baomba 60 mm.
Famokarana herinaratra 220 volts / 10 kVA
HaneB 965 crane: Ny fahafahana 980 kg amin'ny 8 m / 4400 kg amin'ny 1,75 m / 7700 kg amin'ny 0,5 m
Kodiarana: 400 70-26,5 12 PR
4 tsipika matevina miaraka amin'ny basy
Haavolana 3,45 m
Ny halavan'ny entana dia 3,72 m
Ny lanjan'ny serivisy 13830 kg
Ny fika lehibe indrindra amin'ny làlan'ny entana misy 2890 kg
Ny lanjan'ny total 17750 kg
Mampiavaka terrain miavaka
Ity tany terrain Scania ity dia tany am-boalohany ho an'ny Fiarovam-pirenena Soedoà.
Tamin'ny tapaky ny taona 60, ny tafika Soedoà dia maniry an'i Scania hamoaka fiara terrain miaraka amin'ny fandefasana azy ho azy roa miaraka amin'ireo singa mitovy.
Ireo dia nantsoina hoe SBA sy SBAT 110/111.
Vita ny fanamboarana tamin'ny taona 1970 ary ny baiko voalohany ho an'ny fiarovan-tena ho an'ny fiara 2000 dia tamin'ny 1974.
Nahatratra 3400 ny kopia novokarina tamin'ny 1975-1990.
Rehefa nanafatra, ny tafika dia nanao fitakiana manokana an'i Scania:
Ny vidiny dia faritana hoe ohatrinona ny vidiny amin'ny fikarakarana sy ny fikojakojana. Ny vidiny ambany dia midika fa ny fiarovan-tena dia nidina vidiny ho an'ny fiara tsirairay!
Io fiara io dia maodely SBAT ary mahatantona tsangam-bato 60% ary lafin'ny sisiny 40% miaraka amin'ny entana feno.
Ny motera dia motera 300 hp Scania DS 11.
Voalaza fa azo ovaina ny sehatry ny motera ao anatin'ny 4 ora ary mangatsiaka hatrany -40 degre.
Ny fifehezana manokana ny tongotra dia manome hazavana hazavana, izay manamora ny fametrahana fiara ao anaty terrain sarotra ary ny boaty mandeha ho azy dia mamela ny fametrahana fiara amin'ny 3 km / ora.
Fiara tena tsy lavitra izy io ary manana halavirana 40 cm ary hahavony 80 cm.
Io fiara io dia novidina indray ny Fire Service any Helsingborg tamin'ny 1979 nifandraisany tamin'ny fananganana lozam-pifamoivoizana lehibe, izay iheverana ny lozam-pifamoivoizana maro no hitranga.
Vary fitaterana rano litatra 1000 litatra ary tapana HIAB 9 tm no ampiasaina.
Ny vidiny tamin'izany dia SEK 700.000 XNUMX - vola be tamin'izany fotoana izany!
Na izany aza, ny ezaka lehibe ataon'izy ireo amin'ny fiarakodia eny an-dalana mandritra ny fotoana mavitrika ao amin'ny serivisy famonjena ao Helsingborg dia ny manara-maso fiara fiaramanidina mandritra ny rivo-mahery.
Efa hatrany am-piandohan'ny taona 1990, dia nampiasaina tamin'ny fametrahana sambo bozaka 1000 kilao fotsiny io fiara io.
Nividy anay io fiara io tamin'ny taona 1996 ary zara raha mandeha fiara izy.
Ilay fiara dia tsy nanana afa-tsy 2 tompona!